featured – Page 4 – Abuubakar.org
Winter break program: From the Darkness to the Light Find your Identity
Sidii horay loogu balamay Golaha imaamyada iyo Masaajida dacwada selefka u nasab sheegta ayaa khudbadu waxay ku saabsanayd maanta Dilkii Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan loogu gaystay Boosaaso iyo sida ummada Soomaaliyeed u wayday Caalim wayn oo culimadeeda ka mid ah. Sh. c/raxmaan ayaa aad uga hadlay Taariikhda Dr. Axmed iyo qiimihiisii, sidoo kale Sheikha ayaa…
Inaalilaahi wa innaa ilayhi Raajicuun. Xarunta Abubakar ayaa Tacsi khaasa u diraysa dhamaan eheladii iyo qaraabadii Sh. Axmed Xaaji C/raxmaan Ilaahay ka geeriyooday inuu samir iyo badal khayr qaba siiyo, sidaa si leeg waxaan u tacsiyeynaynaa ummada Somaaliyeed oo xidig wayn ka dhacay illaahayna waxaan u waydiinaynaa badal khayr qaba. Sheikha illaahay waxaan uga baryeynaa…